Xubinta taranka haweenka oo cidhiidhi noqota - Hablaha Media Network
Xubinta taranka haweenka oo cidhiidhi noqota
HMN:- Waa cilad galmo oo ku dhacda dumarka qaar, waxay na sababtaa dareen xanuun badan xiliga galmada taasoo hoos udhac wayn ku keenta tayada galmada, ciladaan waxay faragelin ku sameysaa xiriirka lamaanaha iyo tayada noloshooda.
Dumarka qaba xalaadaan waxaa si ikhtiyaar la’aan ah isu soo uruura murqaha xubinta galmada,
waxayna dhacdaa inta aan la bilaabin galmada, in kastoo dumarka qaar uu isu soo uruuro murqaha siilka xili aan ahayn xiliyada galmada sida marka ay isticmaalayaan tambooni ama marka la taabto hareeraha siilka,
xaaladaan waxaa loo yaqaanaa vaginismus. Waana xaalad is hortaagi karta in loo galmooda qofka qaba xaaladaan. Waa xaalad kadhigta galmada mid aad uxanuun badan.
Siil ururka isma hortaago kacsiga qofka dumarka, laakin wuxuu is hortaagaa galmada.